Calaamadaynta caag ah balaastik ah, biraha isku xiran ee caag ah
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Isku xidhka isdhexgalka / Isu-keeninta Induction
Category: Isku xidhka isdhexgalka Tags: isku xidhka, xidhitaanka kuleylka kuleylka, balaastikada xirashada, balaastiig xirashada, xirashada induction, balaastikada isku-xidha, isku xirka kuleylka kuleylka, balaastikada isku xidhka balaastigga
Isku-xirka xajinta wuxuu isticmaalaa kuleylka kuleylka si uu u daaweeyo qalabka xajinta. Induction waa habka ugu weyn ee lagu daaweyn karo macmacaanka iyo shaabbadeenta qaybaha baabuurta sida albaabada, hoods, fenders, muraayadaha indhaha iyo magnets. Induction ayaa sidoo kale xajisaa qalabka wax lagu qurxiyo ee isku dhejiska iyo tan birta iyo kaarboonka fiber-carbon-fiber. Waxaa jira laba nooc oo ah noocyada aasaasiga ah ee isgoysyada: xirxirida, kaas oo u heelan qaybo yar oo ka mid ah walxaha lagu biirayo; xirmo buuxda, oo dhexdhexaadin buuxda.
xirmidda induction ee caag ah oo leh birta
DAWEI Nidaamka isku xirka induction Xaqiijinta hubinta tamarta saxda ah ee guddi kasta. Goobaha kulaylka yaryar ee saameeya kuleylka ayaa yaraynaya wadarta guud ee wareegga. Qalabaynta looma baahna marka la xirayo qalabka birta, taas oo yareeysa walbahaarka iyo dhalin-yarada. Guddi kasta ayaa si elektaroonik ah loola socdaa si loo hubiyo in isbeddelka tamarta tamartu ay ku jirto dulqaad. Iyada oo lagu xiro dhejis buuxda, hal-halis ah - dhammaan gariiradu waxay yareyneysaa baahida loo qabo xirmooyinka loo yaqaan 'spare coils'.
Kuleylka kuleylka waa habka ku xiran habka lagu xiro warshadaha baabuurta. Wareer ahaan waxaa loo isticmaalaa biraha birta iyo aluminiumta biraha ah, induction waxaa si sii kordheysa loo shaqeynayaa si loo xiro qalabka nalalka fudud iyo qalabka kaarboonka. Induction waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro xargaha cirifka, kabaha jabiyaha iyo magnets ee warshadaha electrotechnical. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa hagaha, gawaarida, roogyada iyo albaabada qaybta alaabta cad.
DW-UHF iyo DW-HF waa kuwa ugu horreeya sahayda tamarta dabka qaboojinta codsiyada xidhitaanka induction.
Diyaarinta Birta ee Qashin-saarka Qaboojiyaha